Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex (MT5) Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5
Into eyodwa abadayisi okufanele bayiqonde maqondana nezimakethe ze-forex, noma noma yiluphi uhlobo lwezimakethe zethuluzi elenzekwayo, ukuthi imakethe ingaba namaphethini e-fractal. Lokhu kusho ukuthi izici ezifanayo ezingakhula emkhathizwe wesikhathi eside zingakhula esikhathini esifushane.
Enye yalezi zici yileyo yamathrendi nokushintsha kwentengo. Izitayela zesikhathi esifushane kanye nokushintshashintsha kungakheka ngendlela efanayo njengoba kwenza izitayela zesikhathi eside. Ithrendi elandelayo abathengisi abahweba ngokuhlangana kwamathrendi anjalo ukuze uthole amathuba angcono okuhweba.
Lelisu lokuhweba lihlinzeka ngokuhweba okusekelwe kumqondo ofanayo usebenzisa i 100 Umugqa we-EMA kanye Nenkomba ye-Heiken Ashi Smoothed.
1 Heiken Ashi Smoothed Inkomba
4.3 Ungayifaka kanjani i-Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5?
I-“Heiken Ashi” ngesi-Japanese ihumusha “ama-average bar”. Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed iqanjwe ngokufanelekile njengoba ngokobuchwepheshe iyibha emaphakathi. Empeleni, iyisilinganiso esimelela ukunyakaza okumaphakathi kwentengo.
Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed iwukuguqulwa kwe-Heiken Ashi Candlestick. I-Heiken Ashi Candlestick iyibha eyisilinganiso sangempela ngomqondo othile. Lokhu kungenxa yokuthi icishe ifane nothi lwekhandlela elivamile kodwa ishintsha umbala kuphela noma nini lapho isiqondiso sethrendi yesikhathi esifushane sishintsha..
Ngakolunye uhlangothi inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed ine-computing eyisisekelo eguquliwe eyenza ifane nokunyakaza komugqa omaphakathi onyakazayo.. Empeleni, iziphatha ngokusondelene kakhulu Nesilinganiso Sokuhamba Kwe-Exponential Moving (UMAMA) umugqa. Isabela kakhulu ekunyakazeni kwentengo, nokho futhi bushelelezi. Inzuzo yesikhombisi se-Heiken Ashi Smoothed ngakolunye uhlangothi ukuthi njengoba imelwe imigoqo eshintsha umbala., amaphuzu okubuyisela emuva achazwe ngokucacile futhi angasetshenziswa njengesignali yokuhlehla yethrendi.
Le nguqulo yenkomba ye-Heiken Ashi Smoothed ihlela amabha aluhlaza okotshani ukukhombisa ukuphakama, namabha amnyama awolintshi ukukhombisa i-downtrend. Noma kunjalo, siyilungise kusifanekiso esisetshenziswe kulelisu ukuze sibonakale ngokucacile kungemuva elimhlophe. Lesi sifanekiso sihlela imigoqo eluhlaza ukukhombisa ukuthambekela kwe-bullish, namabha aluhlaza okwesibhakabhaka ukukhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Nakuba, amasignali e-Heiken Ashi Smoothed angathembeka kakhulu, ayiphelele. Isengakwazi ukukhiqiza amasiginali angamanga phakathi nezimakethe ze-choppy. Kanjalo, kungcono ukuvumelanisa amasiginali wokuhlehla kwethrendi nethrendi yesikhathi eside.
Izilinganiso ezihambayo zisetshenziswa kakhulu abadayisi njengesisekelo sokuhlonza isiqondiso sethrendi. Noma kunjalo, kukhona imigqa emaphakathi ehambayo edume kakhulu kuneminye. Abanye bavame ukusebenza kahle njengenkomba yesikhathi esifushane, amanye amathrendi amaphakathi nonyaka, kuyilapho ezinye zisafaneleka kakhulu kumathrendi esikhathi eside.
I-100-period Exponential Moving Average (UMAMA) umugqa uwumugqa ohambayo osetshenziswa kabanzi. Ivame ukusebenza kahle phakathi nendawo- kunkomba yethrendi yesikhathi eside. Kanjalo, futhi ihambisana kangcono nenye inkomba elandelayo yethrendi engasebenza njengesignali yethrendi yamaphakathi nethemu.
Abahwebi bangakwazi ukukhomba isiqondiso sethrendi ngokusekelwe endaweni yesenzo samanani maqondana ne- 100 Umugqa we-EMA. Imakethe ine-bias ye-bullish noma nini lapho isenzo sentengo singaphezu kwe 100 Umugqa we-EMA kanye ne-bearish bias noma nini lapho isenzo sentengo singaphansi kwe- 100 Umugqa we-EMA.
Umthambeka we- 100 Ulayini we-EMA nawo uzolandela indlela yethrendi. I- 100 Ulayini we-EMA wehlela phezulu ngokuthrendayo, futhi phansi ku-downtrend.
Isebenza kahle futhi njengesisekelo sendawo eguquguqukayo yokusekelwa noma ukumelana. Kunezimo eziningi lapho intengo izokwehla khona 100 Umugqa we-EMA ngemuva kokubuyela emuva ubheke kuwo.
Lelisu lokuhweba liyisu eliqhubekayo lokuhweba elihweba ngokuhlangana kwethrendi yesikhathi eside kanye nokushintshashintsha kwentengo yesikhathi esifushane kuya lapho kuqondiswa khona.. Noma kunjalo, esikhundleni sokuhweba noma yikuphi ukudonsa emuva, sizobe sifuna ama-pullback ajulile. Ngokwalesi sizathu, siyobe usebenzisa 100 Ulayini we-EMA wokusisiza ukuthi sihlonze isiqondiso sethrendi, kanye nendawo ye-pullback.
Isiqondiso sethrendi sisekelwe lapho isenzo senani ngokuvamile sihlobene ne 100 Umugqa we-EMA, kanye nesiqondiso somthambeka we 100 Umugqa we-EMA. Abahwebi kufanele futhi baqinisekise ukuqondiswa kwethrendi ngokusekelwe kumaphethini okushintsha amanani esenzo senani.
Ama-pullbacks kufanele abe seduze kakhulu nendawo ye- 100 Umugqa we-EMA. Intengo kufanele ikhombise izimpawu zokwenqatshwa kwentengo njengoba isondela 100 Umugqa we-EMA.
Amabha e-Heiken Ashi Smoothed asetshenziswa njengezimpawu zokungena kwezohwebo. Ukuhweba kuvulwa ngokushesha nje lapho umbala wamabha we-Heiken Ashi Smoothed ukhombisa isiqondiso sethrendi esihambisana ne- 100 Isiqondisi sethrendi ye-EMA.
Intengo kufanele ibuyele emuva ku- 100 Ulayini we-EMA obangela inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed ukuthi ishintshe okwesikhashana ibe luhlaza okwesibhakabhaka.
Intengo kufanele igxume isuke endaweni eseduze 100 Ulayini we-EMA obangela ukuthi amabha e-Heiken Ashi Smoothed ashintshe abuyele kokuluhlaza.
Faka i-oda lokuthenga njengoba amabha e-Heiken Ashi Smoothed eshintsha abe luhlaza.
Setha ukulahleka kokumiswa ezingeni losekelo ngezansi kwekhandlela lokufaka.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho amabha e-Heiken Ashi Smoothed eshintsha abuyele kokuluhlaza okwesibhakabhaka.
Intengo kufanele ibuyele emuva ku- 100 Ulayini we-EMA obangela inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed ukuthi ishintshe okwesikhashana ibe luhlaza.
Intengo kufanele igxume isuke endaweni eseduze 100 Ulayini we-EMA obangela ukuthi amabha e-Heiken Ashi Smoothed ashintshe abuyele kokuluhlaza okwesibhakabhaka.
Faka i-oda lokuthengisa njengoba amabha e-Heiken Ashi Smoothed eshintsha abe luhlaza okwesibhakabhaka.
Setha ukulahlekelwa kokuma ezingeni lokumelana ngenhla kwekhandlela lokufaka.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho amabha e-Heiken Ashi Smoothed eshintsha abuyele ekubeni luhlaza.
Leli su lingasebenza kahle uma lisetshenziswa ohlotsheni olulungile lwemakethe ethrendayo. Lezi kufanele kube izimakethe ezithrendayo kodwa ezinokubuyiselwa okujulile. Noma kunjalo, ingase futhi ikhiqize amasiginali angamanga lapho idayiswa esimweni semakethe esinzima. Kanjalo, kusabalulekile ukuthi abadayisi bakhombe izitayela ezisuselwe esenzweni samanani. Izinkomba zisebenza kuphela njengenkomba nokuqinisekisa ukuthambekela.
Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5 iyinhlanganisela ye-Metatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Heiken Ashi Smoothed 100 EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy for MT5 inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani i-Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5?
Landa i-Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5.zip
Iya kwesokudla ukuze ukhethe i-Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5
Uzobona u-Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5 iyatholakala eshadini lakho
Isiqephu esedluleI-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5
Isihloko esilandelayoExp Color METRO MMRec Duplex MT5 Inkomba